3D Label | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Vietnam OEM ODM-heattransferpaperb2b.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အပူလွှဲပြောင်း Label -> 3D Label
Hauming Import & Export CO., LTD. ၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်ပါသည် 3D Label in Vietnam သောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးကုန်ကြမ်းမှအင်ဂျင်နီယာနှင့်၎င်းတို့၏ကြံ့ခိုင်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်တာရှည်ခံဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အအသိအမှတ်ပြုသည်နေကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၏အရည်အသွေးအာမခံနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရောင်းချသူထံမှရယူဖို့သောဤအသုံးချဖို့တန်းမြင့်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွာအဝေး၎င်း၏ finish ကိုမြင့်မားပြီးအကြမ်းခံနှင့်အံ့မခန်းဖြစ်ပြီးထိုကြောင့်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့မြင့်မားဝယ်လိုအားအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အမျိုးမျိုးသောအရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်။
HAUMING ဖြစ် တစ်ဦး ဦးဆောင် ကုမ္ပဏီ ထို ့သော 3D အပူ လွှဲပြောင်းပေးချေမှုများ အတွက် ပိတ်ထည်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင် customize ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ မြင့်သော အရည်အသွေးပြည့် 3D အပူ လွှဲပြောင်း။ စိတ်ကြိုက် ဂရပ်ဖစ် နှင့် စာသား နိုင် ဖြစ် ပြုပါပြီ။ ထုတ်လုပ်မှုကို အချိန် ဖြစ် 14-20 ရက်။
1. ပုံနှိပ်: ပုံနှိပ်ခြင်း များသော အလွှာ သို့ ရယူ ထို 3D အကျိုးသက်ရောက်မှု။
2. Mould: ကျွန်တော်တို့ အောင် တစ်ဦး မှို ၏ ထို ဆန္ဒရှိ ပုံသဏ္ဌာန် သို့ ဖြတ် မှ ထို 3D ပစ္စည်း။
3. အထူ: နိုင် ကွဲပြားခြားနား အကြား ~ 0.5mm 0.3 ။
4. ဟိုမှာ ဖြစ် မတူညီသော အထူ သို့ ကိုရွေးချယ်ပါ။
5. ဒါဟာ ရှိပါတယ် ကောင်းသော ခုခံခြင်း သို့ ရေချိုး နှင့် Non-ကွဲအက်။
မည်သည့် နောက်ထပ် မေးခွန်းများ, ကြိုဆို သို့ ကျွန်တော်တို့၏ ဝဘ်: http://www.hauming.com.tw/
Screen ကို print ထုတ်အပူငွေလွှဲပြောင်းမှုများ
3D Label | 3D Étiquette | 3D-Aufkleber | 3D Этикетка | Etiqueta 3D | 3D Label |3डी लेबल | 3D Label | 3D Label | 3D تسمية | Máy in chuyển nhiệt 3D | ป้าย 3D | 3D Label | 3D লেবেল | 3D Etiket | 3D立體轉印